သမရိုးကျ rimless အိမ်သာကနေခြားနားချက်
ဒီဇိုင်း rimless ပန်းကန်အားဖြင့်ပုံမှန်အတိုင်းထံမှလက်တွေ့မပါကွဲပြားခြားနားသည်။ အဆိုပါ device ကိုရေဖလပ်ချိန်အတွင်းစီးဆင်းရာမှပန်းကန်လုံး၏လုံးပတ်မှာသမားရိုးကျအိမ်သာ flush လက်စွပ် presupposes ။ အိမ်သာအနားကွပ်လက်စွပ်အခါအားလျော်စွာဖုန်စုဆောင်းထားတဲ့နောက်ကွယ်မှနံရံတစ်ခုကနေဖွဲ့စည်းသည်။ စင်ကြယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အခက်ခဲဆုံး၏ဤအပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထူးအင်္ဂါရပ် rimless အိမ်သာပန်းကန်အနားကွပ်များမရှိခြင်းသည်။ ကြောင့်ဒီရန်, ထုတ်ကုန်အပေါ်တဲ့အခါမှာရောက်ရှိရန်ခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသောနေရာများရှိပါသည် သန့်ရှင်းရေး ။ ဖလပ်ရေပန်းကန်ပြင်ပ splattering ဖျက်သိမ်းရေး, အိမ်သာကိုဆေးကြောခွင့်ပြု, စီးဆင်းမှုနည်းပညာ၏ညှနျကွားအတွက်ထောက်ပံ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
စီးပွားရေးကို (အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းရေစားသုံးမှုအိမ်ထောင်စုဓာတုပစ္စည်းအပေါ်ချွေတာ, သမားရိုးကျအိမ်သာထက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ပါတယ်) ။
လောလောဆယ်စျေးကွက်တစ်ခုရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်စံကြမ်းပြင် rimless အိမ်သာအဖြစ်မော်ဒယ်ပေးထားပါတယ်။
ဆိုင်းငံ့ rimless အိမ်သာ
အိမ်သာပန်းကန်၏ဒီဇိုင်းအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်ရေပိုက် plasterboard ၏နံရံတစ်ခုနောက်ကွယ်ကဝှက်ထားသောအထူးဘောင်ထဲမှာဝှက်ထားလျက်ရှိသောထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ အမြင်တွင်အိမ်သာ၏ပန်းကန်ဖြစ်တယ်, ဒါထုတ်ကုန်ကြမ်းပြင်အထက်ဆိုင်းငံ့ကြောင်းအမြင်အာရုံစှဲ။
အိမ်သာ၏ဤအမျိုးအစားများ၏အားသာချက်များအိမ်သာကြမ်းပြင်နှင့်အဆက်အသွယ်မဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်အခန်းသန့်ရှင်းရေးများလွယ်ကူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်သူတို့ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းကြသည်မဟုတ်နိုင်အောင်သေတ္တာကလေးအတွက်ထုပ်ပိုးသောအပူလျှပ်ကာအလွှာ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအလွှာတွင်အိမ်သာသုံးတဲ့အခါငြိမ်ဝပ်စွာသေချာသည့်အသံ insulator တွင်လည်း, အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
Rimless အိမ်သာ Sersanit
ကြမ်းပြင်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ရောင်းဖို့ထားတဲ့အောက်မှာဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆိုင်းငံ့ rimless ဖလားတစ်ခုမှာ Sersanit ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အချို့သောစနစ်များ (ဥပမာ, Aqua နှင့် Link ကို) ၏ installation ကိုများအတွက် microlift နှင့်သင့်လျော်သောတပ်ဆင်ထားသော, အပဲ့ချိတ် rimless အိမ်သာ Sersanit Rure ။ က antibacterial ထိုင်ခုံ duroplastovogo mount နိုင်စွမ်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပေးစက် - အကောင်းအဆိုး cons
စမတ်တီဗီများအတွက် Keyboard ကို
သက်သေခံဖို့ Frame ကရေကန်
အပူ dacha များအတွက်ရေချိုးခန်း
Motoblock အတွက် "Crow အဘိဓါန်ခြေ"
တဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏ရာ - မီးဖိုချောင်များအတွက်လျှပ်စစ် Shredder ထုတ်ကုန်?
အထီးမြင်းနှင့်မိန်းမမြင်း - အသုံးပြုပုံများ
Celine Dion သူ၏သားတို့နှင့်အတူခရစ္စမတ်ဓာတ်ပုံကိုဖြန့်ချိ
ကလေးသူငယ်အခ 38 ၏အပူချိန်
လယ်သမားစျေးကွက်မှာ Irina Shayk: ကလိုအပ်သောကြောင်း Homemaker
ပဲဟင်း - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်း